Zeorzia: Kandidà Amin’ny Eurovision Miaraka Amin’ny “Tsy Mila Put In Izahay” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Septambra 2018 8:30 GMT
Tohin'ny ady izay nifanaovany vao haingana tamin'i Rosia, nanambana ny hanao ankivy ny fifaninanana hira Eurovision, nokarakaraina tao Maosko aloha i Zeorzia tamin'ity taona ity, avy eo izy niova hevitra (amin'ny teny anglisy ireo rohy manaraka). Kanefa, raha toa io fiovàna io tany am-piandohana ka toy ny andrana handaminana ireo fifandraisana ratsy endrika, ny nifanohitra tamin'izay no nitranga omaly nandritra ny fifanintsanana tao amin'ny firenena.
Tao anaty lahatsoratra roa, manazava ny resabe nifandirana nitsimoka tao anatin'ireo tononkira izay tokony hisolo tena ny firenena ny This is Tbilissi Calling.
Afaka mampiasa ny fifaninanana Hira Eurovision i Zeorzia mba hanesoana an'i Rosia mpifanila aminy, taorian'ny faharesena tamin'ny ady izay nifanandrinan'ireo firenena roa ireo tamin'ny taona lasa, raha toa ka hira iray feno fihantsiana no nofidian'ny vahoaka tao Zeorzia hisolo tena azy ny taona 2009. Ny Eurovision tokoa, dia hatao amin'ity taona ity ao Maosko, izay tsy isalasalàna fa tsy hahazoan'ny hira Put-In Disco (“Disco Poutine”) fandraisana mafana. […]
[…] Ny fiveranany manao hoe: “Tsy Mila Mametraka Izahay/Hetsika tsy mahomby/Mamono ny revy izany.” Izay heno, raha ny marina, dia hoe “Tsy Mila Put in izahay” […] (Fandikàna ara-bakiteny: “Tsy te-hifidy (na hametraka)”/ny hetsika tsy mahomby/Manimba ny gadona io” ary ny heno dia hoe “Tsy mila Poutine” – [naotin'ny mpandika: misy maromaro ireo kilalaon-teny…)
Omaly [ny 19 Febroary], nilaza io blaogy io ihany fa ny “We Don't Wanna Put In” an'i Stefane sy 3G no nofidiana mba hisolo tena ny firenena.
Nofidian'i Zeorzia hisolo tena azy any amin'ny fifaninanana hira Eurovision 2009 hatao ao Maosko ilay hira mampiasa hafetsena manohitra rosiana We Don't Wanna Put In - raha toa, mazava loatra, ka avelan'ireo mpikarakara handray anjara ny hira iray mpifaninana hanivaiva ny Praiminisitry ny firenena mpampiantrano. […]
Manoratra i Oiko Times fa mety ho voatery hanova an'ireo tonony i Zeorzia, raha mihevitra kosa ny Posh & Becks of Eurovision fa milalao afo i Zeorzia.
Misy te hifanamby ve mikasika ny fotoana ilain'ny EBU mba hanomezana sazy an'i Zeorzia? Tsy misy tandindona kely akory hoe mety hisy vintana ny hanomezan'izy ireo alalana an'io tononkira io taorian'ny zava-nitranga teo amin'i Zeorzia sy Rosia. «We don't wanna PUT IN» no lohatenin'ilay hira, ary amina gadona disco. Tena mampididoza. Azonao ve? Put in. Poutine. Tsy tianay Poutine.
Haingana ny fanehoankevitr'ireo mpanaramaso hafa ny Eurovision eo amin'ny blaogin'izy ireo. Manoratra ny Unzipped: Gay Armenia fa hiteraka fifandiran-kevitra be ilay hira:
Noraisin'i Zeorzia ny fanapahankevitra handefa ny Stefane & 3G miaraka amin'ny “Tsy mila mametraka izahay” . Kilalaon-teny iray manesoeso sy mampihomehy:) Raha somary efa fandre amin'ny andavanandro ilay hira amin'ny maha-hira azy, mahasarika sady mahafinaritra izy. Ary mora hiraina […].
Ity hira ity, raha toa eken'ireo mpikarakara ny Eurovision, dia ho ratsy fandraisana tokoa ao Maosko, miaraka amin'ireo horakoraka mety hitranga ao anaty kianja. Tsy azo antenaina ny hanomezan'i Rosia ny naoty 12 ho an'i Zoerzia (marobe ireo manantena fihetsika politika toy izany avy any amin'i Rosia.) […]
Nisy tsy tapaka tany aloha tany ny fikasana hanao hira fanoherana tamin'ny Eurovision: tafita ny sasany, ireo hafa kosa tsia. Ny fikasàna vao haingana angamba tena nahomby indrindra, izay tian'ireo Zeorziana ho averina avoaka indray, dia ilay an'i Okraina roa taona lasa izay, nahitàna an'i Verka Serduchka izay nanao kilalaon-teny, tamin'ny fihirana ny “Lousha Toumbaï” (=”Veloma ry Rosia”). […]
Tombanan'ilay blaogy fa mety hahazo fahombiazana ao Eoropa andrefana sy any amin'ireo firenena sovietika ilay hira, saingy mampitandrina koa fa mety hitondra vokany mifanohitra amin'izay tadiavina. Na inona na inona anefa, milaza i JawnBC fa fara-faharatsiny lasa mahaliana ny Eurovision.
Mihaino aho, sady manandrana mamantatra izay nahavita nanoratra an'io teny anglisy tsy alehany io. Fa nisy feon-dakolosy kely avy eo.
Tsy te hametraka izahay, mamono revy ny fihetseham-po miiba. Na: Tsy tianay Putin. [dikanteny: jereo ao ambonimbony ao]
Ny fitsipiky ny Eurovision dia mandràra ireo hira misy resaka politika. Saingy noho ny adin'izy ireo faramparany, sy ny antony hoe atao any Maosko ny fifaninanana, sahy mifanamby aho fa vitan'ny vahoaka Zeorziana ny nilefitra.
Azo antoka fa tsy mbola ho tapitra mihitsy ny fandrenesana resaka mikasika an'io hira io.
fanavaozana: Araka ny “Monde” tamin'ny 12 Martsa 2009, “Ny Orinasa Mpikarakara ny Eurovision dia tsy namela ilay hira […], ny talata 10 martsa, nohon'ny ‘tsy fahafenoana an'ireo fepetra mikasika ny fifaninanana‘. Manana hatramin'ny 16 martsa i Zeorzia hanovàna ny fitaovam-piadiany. […]